Push Rudzi Mascara Kuzadza Muchina, Flat Kunyora Muchina - Eugeng
Eugeng inyanzvi uye inogadzira inogadzira michina yezvizoro muShanghai. Isu tinoramba tichiedza kuyisimudzira iri kukura mukurumbira mukati meye cosmetics indasitiri nekusangana nevatengi zvigadzirwa zvekugadzira, uye ichapa zvazvazvino uye epamusoro matekinoroji eruzivo uye ruzivo rwe optimum solution nekugara uchigara uri pamberi pekuda kwemutengi. Michina yedu mikuru inosanganisira lip gloss yekuzadza muchina, mascara yekuzadza muchina, chipikiri polish yekuzadza muchina, inopisa yekuzadza muchina, muromo webharisamu yekuzadza muchina, lipstick yekuzadza muchina, swirl kirimu yekuzadza muchina, cosmetic poda yekutsikirira muchina, yakasununguka poda yekuzadza muchina, yakabikwa poda kugadzira muchina , lip gloss mascara yekunyora muchina nezvimwe.
Eugeng International Kutengesa Co., Ltd.
Pfungwa yedu yechiratidzo ndeye "hutano, fashoni, nyanzvi". Kuzivikanwa chete kwevatengi ndiko kunoratidza kukosha kwedu. Isu tinoisa mhando yezvigadzirwa munzvimbo yekutanga!
Kutanga, kusanganisa, 1 seti 20L yekusanganisa tangi; Kusanganisa kumhanya kunogona kuchinjika; Chisanganiso scrapper nyore kubvisa uye reassembly; CW nguva uye CCW nguva inogadziriswa; Tangi inogona 90degree yakavhurika kuburitswa zviri nyore rwechipiri, extrusion, 1 seti 10L tangi; Screw ...
Muna 2020, isu vanopinda CBE zvakanaka muShanghai kubva July 8 -12. Tinoratidza zvigadzirwa zvedu zvikuru, senge rotary lip gloss yekuzadza muchina, kusundira mhando lip gloss mascara yekuzadza muchina, compact poda yekutsikirira muchina, yakatwasuka yekunyora muchina, cosmet ...